Drostanolone (Masteron Propionate) ntụ ntụ (521-12-0) | AASraw
Masteron Propionate (Drostanolone) ntụ ntụ
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Masteron Propionate (Drostanolone) ntụ ntụ
SKU: 521-12-0. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkwa nke Drostanolone (Masteron Propionate) ntụ (521-12-0), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa mmachi.
Masteron Propionate (Drostanolone) uzuzu uzuzu
Raw Masteron Propionate (Drostanolone) ntụ ntụ isi Characters
aha: Masteron Propionate (Drostanolone) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C23H36O3
Ọbara arọ: 360.53
Raw Masteron Propionate (Drostanolone) ntụ ntụ iji mee ihe na steroid steroid
Raw Masteron Propionate (Drostanolone) ntụ ntụ aha
A na - akpọ ntụ ntụ nke Masteron Propionate (Drostanolone) (CAS 521-12-0) dịka Drost P, DP, Masteron, Masteron P, Mast P, MP.
Raw Masteron Propionate (Drostanolone) ntụ ntụ Usage
50-150mg / ml ma bụrụ ngwa ngwa ngwa
350-500mg kwa izu (mbipụta propionate, gbanye kwa ụbọchị ọ bụla)
Ịdọ aka ná ntị na Masseron Propionate (Drostanolone) ntụ ntụ
Mmetụta (na ụfọdụ ụfọdụ) nke ihe ọ bụla anabolic steroid ọ na-akwakọba na ọ bụla dịgasị iche iche nke usoro Masteron. E kwuwo na mbụ na Masteron nwere njedebe ike anabolic, na-eme ka ọ dịtụ ike karịa Testosterone, na n'ọnọdụ ụfọdụ enwere ike ịda mbà.
Raw Masteron Propionate (Drostanolone) ntụ ntụ Ntuziaka ọzọ
Masteron kasị mma tinye n'ọrụ stacked n'akụkụ ndị ọzọ ogige ọ bụla Masteron cycles. Ọ bụ nanị n'ụzọ a ka Masteron nwere ike isi jiri ya mee ihe n'ụzọ dị irè na ntanye ma ọ bụ nke na-agafe, nke ọ ga-egosi na ọ bụrụ na ọ na-agba ọsọ dị ka steroid anabolic isi na usoro ndị dị otú ahụ.
Fluidanolone ntụ ntụ (CAS 521-12-0)
Raw Drostanolone ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Masteron Propionate ntụ ntụ: ịzụta ntụ ntụ drostanolone (CAS 521-12-0) site na AASraw
Fluoxymesterone (Halotestin) ntụ ntụ